ခင်ပွန်းကိုအောင်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းပါ။ ? [မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြန်ကောင်းဖို့]
ခင်ပွန်းယဉ်ဖို့ဆုတောင်းပဌနာအိမ်တွင်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အမြဲတမ်းခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံဘုရားသခင့်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ခင်ပွန်းယဉ်ဖို့ဆုတောင်းပဌနာ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပိုမိုသည်းခံခြင်း၊.
လူတစ် ဦး စီသည်ဘ ၀ ၌ခက်ခဲသောအခြေအနေများကိုကွဲပြားခြားနားစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ သင်၏ခင်ပွန်းသည်အလုပ်ခွင်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုများစွာကြုံတွေ့နေရပါကသို့မဟုတ်သူ့အတွက်စီစဉ်ထားသည့်အရာများမသွားပါကစိတ်လှုပ်ရှားနေသည့်ခင်ပွန်းကိုစိတ်ငြိမ်စေရန်ဤဆုတောင်းချက်ကိုပြောပါ။
3 ခင်ပွန်းယဉ်ဖို့စိန့် Amanso ရဲ့ဆုတောင်းပဌနာ
4 အိမ်မွေးခင်ခင်ပွန်း - Saint Tame
သခင်၊ ထာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည်တန်ခိုးကြီးတော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားတပါးတည်းသာလျှင်ဘုရားသခင်မှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိ။ ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းကိုလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်၊ ငါ့ကိုပိုပြီးလေးစားစွာဆက်ဆံဖို့၊ ကျွန်မနဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူပိုကောင်းအောင်ပြုဖို့ကူညီပေးပါ။ ခင်ပွန်းသည်ဖခင်တစ် ဦး အနေနှင့်အိမ်ထောင် ဦး စီးအနေဖြင့်မည်သို့တိုးတက်ရမည်ကို၎င်းကသင်ကြားပေးသည်။ ကျွန်မရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီအခက်အခဲကငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ငါ့ရဲ့အမြင်တွေကိုတိုးတက်အောင်၊ တိုးတက်ဖို့၊ စိတ်အေးအေးထားဖို့၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ဖို့၊ ချစ်ဖို့ကောင်းဖို့နဲ့ငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပိုဖို့ရန်စေ့ဆော်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာပေးပါ။ ကျွန်ုပ်ရရှိမည့်ကောင်းချီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပြီးတော့သူနဲ့လမ်းမှန်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာငါ့ကိုသင်ပေးဖို့နောက်တစ်ခါထပ်မေးပါတယ်။ အာမင်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ခံစားရသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရနိုင်သည် (ဥပမာ၊ ချစ်ရသူ၏အမည်) ။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသူရဲ့နာမည်ကိုပြောပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ (မင်းဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပြောပါ။ ) မင်းကိုငါအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။
ခင်ပွန်းယဉ်ဖို့စိန့် Amanso ရဲ့ဆုတောင်းပဌနာ
အိမ်မွေးခင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Saint - Mark
စိန့်မာ့ခ်သည်ခြင်္သေ့များ၊ မြွေများနှင့်မမြင်နိုင်လောက်သည့်သတ္တဝါများကိုယဉ်ပါးအောင်လုပ်ပြီးသူ၏တန်ခိုးဖြင့်သူ့ကိုယဉ်ပါးအောင်၊ ဒေါသ၊ ဒေါသ၊
San Marcos သည်သင်၏နှလုံးကိုထိခြင်း၊ ပိုမိုနူးညံ့စေခြင်း၊
၎င်းသည်သင်၏စိတ်ကိုထိမိပြီးဒေါသအရှိန်နှင့်ပါ ၀ င်မှုအားလုံးမှလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်။
သခင်ယေရှုကိုကျိန်ဆိုသည်မှာသူသည်ဤမျှကြီးမားသောဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူသည်တစ်ချိန်တည်း၌ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ သူသည်ယခုမှ စ၍ တစ်ခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်၊
အိမ်မွေးခင်ခင်ပွန်း - Saint Tame
သင်၏မိသားစုကို ၀ မ်းနည်းကြေကွဲစေပြီးသင်၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုကြားရသောမကောင်းသောစာလုံးပေါင်းကိုအင်အားကြီး။ ပညာရှိသော Saint Tame ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါစေ။
Saint Tame ကသင့်ကိုကုသပေးမယ်၊ ဒီဒေါသအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပြီးဒေါသမထွက်ဘဲအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပြproblemsနာအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
Saint Tame ဟာကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့ဒေါသကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးပြီးသူ့ဘ ၀ ရဲ့အခက်ခဲဆုံးနဲ့တင်းမာနေတဲ့အချိန်တွေမှာသူ့ကိုယဉ်ပါးစေခဲ့တယ်။
Saint Tame ကမင်းကိုအောင်နိုင်လိမ့်မယ်၊ မင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးမင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မယ်။
“ မင်းရဲ့ဘဝမှာဒီလောက်များများခံစားခဲ့ရသူ၊ မင်းဘယ်သူ့ကိုမှမခံထိုက်တာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့မင်း Santa Catarina၊ ငါနဲ့ငါ့မိသားစုကိုကြည့်ပြီးခင်ပွန်းနှင့်အတူကူညီပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ် (ခင်ပွန်း၏နာမည်အပြည့်အစုံ)
သူကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်၊ ဒေါသထွက်တယ်၊ ရန်လိုတတ်တယ်၊ ငါမပျော်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
ငါစမ်းကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်၊ နောက်တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကအေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်ကူညီဖို့တောင်းပန်ပါတယ်။
ကျွန်မခင်ပွန်း Santa Catarina ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။
၎င်းသည်သင့်ဘ ၀ ၏အရှုပ်ထွေးဆုံးအချိန်များ၊ အထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးသောအချိန်များကိုကျော်လွှားရန်ကူညီနိုင်ပြီးနေ့စဉ်၊ ညတိုင်းနှင့်မိနစ်တိုင်းတွင်သင်၏အာရုံကြောများပေါက်ကွဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၎င်းသည်သင်၏နှလုံးသား၌အေးဆေးတည်ငြိမ်စေသည်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သာမှုကိုပေးသည်။ သင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိမကောင်းသောအကြံအစည်များကိုလည်းနိုးကြားစေသည်။
ဒီကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနေ့၌ Santa Catarina ကိုကူညီပါ။
လင်ယောက်ျားကိုယဉ်ပါးအောင်ဆုတောင်းခြင်းသည်နေ့တိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ဆုတောင်းခြင်းကိုအမြဲသတိရရန်သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များထဲမှအချိန်တစ်ခုအတွင်းသင်ထည့်သင့်သည်။ သင်ဆုတောင်းလေဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုများလေလေဖြစ်သည်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဆက်ဆံရန်ဆုတောင်းသောအခါသင်သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံကြည်ရမည်။ သင့်အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို ပို၍ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန်သခင်ဘုရားလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရမည်။
သို့သော်သတိထားပါ - ဝါကျသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလျှင်မှသာထိရောက်မှုရှိသည်။ သင်၏အိမ်ထောင်ရေးကိုအောင်မြင်စေရန်သင်၏ခင်ပွန်းကိုစိတ်အေးအေးထားလျှင်သူသည်ပိုကောင်းသောယောက်ျားဖြစ်လာသည်ဆိုလျှင်သင်သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
တစ် ဦး စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ဆုတောင်းပဌနာဆုတောင်းပါ